It is me. Ko Niknayman.: နိုင်ငံတကာလူ့ အခွင့်အရေးနေ့ ။
နိုင်ငံတကာလူ့ အခွင့်အရေးနေ့(ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်) တွင် မြန်မာပြည်အရေး ဆောင်ရွက်မှုများ (အပိုင်း ၁)။
(ဓါတ်ပုံပေးပို့ လာကြတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့သြစတြေလျနိုင်ငံမှ မိတ်ဆွေများအား ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်)။
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်သော လှုပ်ရှားမှု။
သြစတြေလျနိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်သော လှုပ်ရှားမှု။
Posted by Ko Niknayman at 8:23 PM